China 10x38mm Solar fuse emgceni umnini 1000V MC4 fuse isinxibelelanisi mveliso kunye nabathengisi | UBUNGOZI
10x38mm Solar Fuse emgceni umnini 1000V MC4 fuse Isixhumi
I-10x38mm Solar Fuse Inline holder 1000V MC4 Fuse Connectorwork kwinkqubo Solar PV ukukhusela umthwalo ongaphezulu ngoku kwiphaneli yelanga kunye neInverter. I-10x38mm Solar Fuse Connector iyahambelana noMninzi woQhakamshelwano kunye nezinye iintlobo ze-MC4, kwaye ilungele intambo yelanga, 2.5mm, 4mm kunye ne-6mm. Inzuzo le fuse emgceni inokutshintshwa, uxhulumaniso olukhawulezileyo noluthembekileyo, ukumelana ne-UV kunye ne-IP67 engenamanzi, inokusebenza ngaphandle kangangeminyaka engama-25.
Uhlobo: I-MC4 iyahambelana, fuse inokutshintsha
Ubungakanani be-fuse yomgca: 10x38mm
Ixabiso elilinganisiweyo: I-1000VDC
Uluhlu lwefuse: 8A, 10A, 12A, 15A, 20A, 25A, 30A
Inkcazo ye-1000V 10x38mm MC4 Fuse Isinxibelelanisi
Le mveliso yi-8A / 10A // 12A / 15A / 20A / 25A / 30A gPV fuse efakwe kumnini wefuseji engenamanzi. Inika isikhombisi se-MC4 isikhokelo kwisiphelo ngasinye, isenza ukuba sihambelane nokusetyenziswa kweKhithi yeAdapter kunye nezikhokelo zepaneli yelanga. Le Fuse Holder yenzelwe ukubonelela ngokhuseleko olupheleleyo kwisekethe kumbane wamandla elanga. Iifusi zithintela imisinga emikhulu ekonakaliseni iipaneli zelanga. Thenga le mveliso ukukhusela ngakumbi kwinkqubo yakho.
Uncedo lokuSebenzisa ngokuLula
Iyahambelana neentambo ze-PV ezinobubanzi obuhlukeneyo bokugquma.
Yenzelwe uluhlu olubanzi lwezicelo zeDC.
Iplagi-kunye nokudlala elula.
Izixhobo ezizitshixayo ezizenzekelayo zamanqaku abesilisa nabasetyhini zinika unxibelelwano ngokulula nangokuthembekileyo.
Ukungena kwamanzi-Ukhuseleko lweklasi ye-IP67.
Izinto zokuvala i-PPO.
Umthamo ophezulu ophetheyo ngoku
Icandelo lokuKhusela II
Isinxibelelanisi samkela ukuchukumisa kunye nokufaka ingcongolo kunye nohlobo lwe-knob yangaphakathi
TIdatha ye-echnical ye-MC4 PV Fuse Connector
Umda wefuse Fuse 10x38mm
Fuse enokutshintshwa Ewe
Uluhlu lweFuse 8A, 10A, 12A, 15A, 20A, 25A, 30A
Izinto eziluncedo ze-DC Fuse Holder
Ukuzoba I-MC4 emgceni weFuse Holder
Egqithileyo I-UV ekhuselekileyo ye-PV yocingo oluqinileyo lweCar Cable Tie
Okulandelayo: I-MC4 Solar Diode Connector yokuDibanisa iPhaneli yeSola
1000V umnini fuse yelanga
10x38 pv fuse isinxibelelanisi
10 × 38 Umgca weFuse Fuse
30A fuse yelanga
DC fuse kwiplagi
Iscreen fuse fine